कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको अब सामूहिक दाहसंस्कार !
देशवासीका नाममा सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘सबैजसो अस्पताललाई कोभिडको उपचार गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्‍याइएको छ । गत एक वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य संरचनामा उल्लेखनीय सुधार गरिएको छ । देशभर होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूमा शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन सुन्दा लाग्छ, कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तर, उनले सम्बोधन गर्दैगर्दा पशुपतिको आर्यघाटमा भने लासहरू जलाउन लाइनमा राखिएका थिए ।
कारण- पशुपतिको विद्युतीय शवदाहगृहको एउटा मेसिन बिग्रिएको थियो । मेसिन बिग्रिएपछि कोभिडका कारण मृत्यु भएकाहरूको शवलाई नेपाली सेनाले विद्युतीय शवदाहगृहनजिकै बागमती नदीको किनारामा जलाइरहेको थियो ।
विद्युतीय शवदाहगृमा जलाउन तयार पारेको शवको संख्या ।
‘दुईवटा मेसिनमध्ये एउटा मर्मतको क्रममा छ । एउटाले मात्र धान्न नसक्ने भएपछि बाहिरै जलाउन सुरु गरेका हौँ’, नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेल भन्छन्, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सहकार्य गरेर बाहिरै जलाएका हौँ ।’
संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै जादा शव व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म धर्म संस्कृतिअनुसार नै सम्मान दिएर अन्त्येष्टिको प्रयास गरेका छौँ’, उनले भने, ‘नेपाली सेनाले पाएको जिम्मेवारी छोड्ने छैन । तर, चुनौती भने थपिएको छ ।’
कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढेपछि सामूहिक दाहसंस्कारमा जानुपर्ने स्थिति आएको सेनाले संकेत दिएको छ ।
बागमती किनारामा कोभिडका कारण मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्दै नेपाली सेना ।
पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल पनि विद्युतीय शवदाहगृहमा चाप बढेको बताउँछन् । ‘लामो समय लासलाई होल्ड नगरौँ भनेर बाहिर सुरु गरिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म त धार्मिक परम्परा अपनाएका छौँ । ६-७ घण्टा लाइनमा राख्नुभन्दा बाहिर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।’
उनका अनुसार विद्युतीय शवदाहगृहले दैनिक २५ वटासम्म लास जलाउन सक्छ । तर त्यो भन्दामाथि भएमा धान्न सक्दैन । ‘एक सयवटा शवसम्मलाई अहिले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ’, उनले भने, ‘त्योभन्दा बढी भएमा अर्को विकल्पमा जानुपर्छ ।’
विद्युतीय शवदाहगृहले धान्न नसकेपछि आइतबार नै डोजर लगाएर बागमती नदीको किनारामा शव व्यवस्थापनस्थल तयार पारिएको छ ।
शव व्यवस्थापनका लागि ठाउँ तयार गर्दै ।
आइतबार मात्र कोभिडका कारण देशभर ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोभिडका कारण ३३६५ जनाको मृत्यु भएको छ । आर्यघाट मात्र होइन, अस्पताल पनि कोभिडका बिरामीले भरिएका छन् । आईसीयू, भेन्टिलेटरमा बिरामी मृत्युसँग जुधिरहेका छन् ।
अस्पतालको ढोकामा पुगेका कोभिडका बिरामीहरू बेड नपाएर फर्किरहेका छन् । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू भन्छन्, ‘हामी थेग्नै नसक्ने भयौँ । अस्पतालमा बेड भरिएको छ ।’
जस प्रधानमन्त्रीलाई, अपजस स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राम्रो कामको जस आफूले र अपजस जति स्वास्थ्य मन्त्रालयको टाउकोमा देखाएको टिप्पणी गर्छन् ।
‘आफूले बनाएको हाँडी कसले पो नराम्रो भन्छ र ? अवस्था अस्तव्यस्त छ’, उनी भन्छन्, ‘जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गर्न नसकेको हो ।’ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा महामारी जटिल बनेको उनको तर्क छ ।
‘बिरामीले एक ठाउँमा बेड पाएन भने यो ठाउँमा छ भनेर मन्त्रालयले भन्न सक्नुपर्छ । रात परेपछि मन्त्रालयका अधिकारीको फोन अफ हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘समन्वयको अभावमा संक्रमितको उपचारदेखि मृत्युको संस्कारसम्म समस्या भएको हो ।’
तस्वीर : सागर चन्द
विद्युतीय शवदाहगृह बिग्रिएपछि बागमती किनारमा डोजर लगाएर दाहसंस्कार थलो बनाइँदै
विद्युतीय शवदाह गृह बिग्रिएपछि बागमती किनारमा कोरोना संक्रमितको शव जलाइँदै
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २०, २०७८, १९:११:००